जिम्प वा फोटोशपको साथ कसरी टेन पाउने? | क्रिएटिव अनलाइन
सामान्यतया, मानिसहरू अगस्ट महिनामा छुट्टीमा हुन्छन्, गाउँमा घुम्न जाने रमाइलो पोखरीमा जाँदा, नयाँ ठाउँहरू देख्न वा समुद्र तटमा सूर्यको पूजा गर्नेहरू। तर यदि तपाईं ती व्यक्तिहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ जो गर्मीको बीचमा, कम्प्युटरको अगाडि आफ्नो समय खर्च गर्छन्, या त पार्टटाइम कामहरू, दायित्वहरूको लागि वा केवल गर्न चाहानुहुन्छ र केसको वास्ता नगरी, यो अक्सर सनबेट गर्न चाहने धेरै गाह्रो हुन्छ बर्षको यस महिनाको लागि एक सुन्दर तान देखाउन।
भाग्यवस धेरैको लागि, ग्राफिक डिजाइन उपकरणहरू उनीहरूले हामीलाई यो सानो समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छन् यदि हामीसँग कम्प्युटर स्क्रिन छोड्ने अवसर छैन र तपाईंलाई केवल तपाईंलाई मात्र फोटोको आवश्यक छ जुन तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्दछ र यस लेखमा हामी तपाईंलाई कसरी देखाउने छौं GIMP वा Photoshop मा ब्राउन धन्यवाद जानुहोस् र यो यो हो कि केवल प्रभाव प्रभावको रूपमा छविमा लागू हुन्छ र वास्तविक जीवनमा होइन, कम्तिमा तपाईंसँग यो तपाईंको अवसरको सामाजिक नेटवर्कमा तपाईंको परिचितहरू र साथीहरूसँग साझा गर्ने अवसर हुनेछ।
1 फोटोशपको साथ कसरी राम्रो ट्यान पाउने?
2 जिम्पको साथ कसरी टेन गर्ने?
फोटोशपको साथ कसरी राम्रो ट्यान पाउने?
यदि हामी फोटोशपको साथ यो सुन्दर खैरो छाला टोन प्राप्त गर्न चाहान्छौं भने, यो गर्न धेरै सरल छ, यद्यपि यो केहि थकाऊ हुन सक्छ।
हामीलाई चाहिने पहिलो चीज भनेको आफैंको तस्विर हो समुद्रमा वा पोखरीमा र हामी सबै छनौट गर्दछौं सेक्सनहरू जुन छालाको भाग हुन्छन्। यो गर्न हामी धेरै विधिहरू प्रयोग गर्न सक्छौं जस्तै चुम्बकीय लासो, बहुभुज ल्यासो वा द्रुत मास्क मोड प्रयोग गरेर यसको भिन्नतामा।
छनौट गर्नको लागि, हामी Q कुञ्जी प्रेस गर्दछौं र सम्पूर्ण क्षेत्रमा र paint लगाउँदछौं जुन ब्रशको साथ छालालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। पहिले नै यो गरिसक्यो, हामीले चित्रित गरेका सबै कुरा रातो रातोमा चिन्ह लगाइनेछ। यस पछि हामी फेरि Q कुञ्जी थिच्नुहोस् सामान्य मोडमा फर्कन सक्षम हुन, हामी चयन विकल्पमा जान्छौं र इन्भर्टमा क्लिक गर्दछौं।
अब जब हामी छाला छानेका छौं, हामीले केवल आफूलाई दुई प्यारामिटरहरू समायोजन गर्न समर्पित गर्नुपर्दछ, मुख्य एउटा हो छवि स्तरहरू र दोस्रोमा हामीसँग छ चमक र कन्ट्रास्ट उही। पहिले हामी सेटि toमा जान्छौं र स्तरहरूमा क्लिक गर्दछौं वा हामी Ctrl + L पनि थिच्न सक्छौं। हामीले छनौट गर्नुपर्नको स्तर हामीले छनौट गरेको फोटो, मूल छालाको टोन र हामी यसमा राख्न चाहानु भएको ट्यानको स्तरमा निर्भर गर्दछ।
यो गर्न, हामी केवल सेटिंग्स को प्रयास गर्छौं हामी ट्यान टोन प्राप्त नगरेसम्म जुन हामीलाई सबैभन्दा मनपर्दछ।
ठीक छ, हामीसँग पहिले नै हामीले चाहेको टोन छ तर अब यो अलि अलि देखिन्छ हामीले दोस्रो प्यारामिटरको साथ जारी राख्नै पर्छ जुन चमक र कन्ट्रास्ट हो, जुन हामी सेटि settings मेनूबाट पनि गर्छौं। उही तरिकामा हामी समायोजन लागू गरिरहेका छौं जब सम्म हामी हामीले चाहेको परिणाम प्राप्त गर्दैनौं।
अन्तमा, हामीले भर्खर छाला सेक्सन अचयन गर्नुपर्दछ, चयन मेनुबाट वा Ctrl + D थिचेर।
जिम्पको साथ कसरी टेन गर्ने?
जिम्प उपकरणको प्रयोग गरेर भव्य टेन प्राप्त गर्न, हामीले अनुसरण गर्नुपर्ने प्रक्रिया बिल्कुल उस्तै छ, भिन्नताका साथ। केहि मेनु फरक हुन सक्छ। एकचोटि हामीले सम्पूर्ण क्षेत्र छनौट ग selected्यौं जुन फोटोको छालासँग मिल्दोजुल्दो छ, हामी विन्डोमा जान्छौं जहाँ स्तरहरू देखा पर्दछ, र the्ग मेनूबाट, हामी स्तरहरूमा क्लिक गर्छौं र मानहरू समायोजित गर्छौं जबसम्म हामीले परिणाम हामीले प्राप्त नगरे सम्म धेरै
त्यस्तै प्रकारले हामीले फोटोशपको साथ गरेका थियौं, अब हामीले गर्नु पर्छ चमक र कन्ट्रास्ट समायोजित गर्नुहोस्, ताकि छाला सुस्त देखिँदैन। यस पटक हामी रंग मेनूमा जान्छौं। यो गरिसकेपछि, छालाको क्षेत्र अचयन गर्नु मात्र बाँकी चीज हो र हामी ट्यान पाउँछौं जुन हामी चाहान्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » Photoshop » जिम्प वा फोटोशपको साथ कसरी टेन पाउने?